Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo sheegay in dagaalka Tukaraq sii socon doono… – Hagaag.com
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo sheegay in dagaalka Tukaraq sii socon doono…
Posted on 1 Juunyo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad gobolleedka Puntland C/xakiin C/laahi Xaaji Cumar (Camey) ayaa degmada Buuhoodle ka sheegay in Puntland ka go’an tahay sida hadalka u dhiggay sii socoshada dagaalka deegaanka Tuka-raq oo ay isaga soo horjeedaan Somaliland.
Wuxuu sheegay in dagaalkaasi sii socon doono inta Somaliland ay heysato taako ka mid ah dhulka Puntland, kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Buuhoodle.
Dadka reer Buuhoodle ayuu ka dalbaday in ay taageeraan ciidamada Puntland iyo in la helo dhalinyaro ciidan ah oo ka qeyb qaata dagaalka Tukaraq.
“Sida aad la socotaan laba dagaal ayaa dhacday, mana joogsan doono dagaalka, waxaan qabaa hadii caalamka uu isku yimaado xaqiiqada marna Puntland kama leexan doonto, xaqiiqadana waxa weeye inta Somaliland ay heysato taako ka mid ah dhulka Puntland dagaalka isma taagi doono,” ayuu yiri Madaxweyne ku-xigeenka Puntland.
Labada dhinac Puntland iyo Somaliland ayaa hawada isku marinaya hadalo xambaarsan dhiilo colaadeed, iyadoo dhinac walba kan kale ku eedeeynayo in uu duulaan ku soo qaaday dhulka uu maamulkiisku ka arrimiyo.